News 18 Nepal || अमेरिकामा आगलागीमा परी ५ नेपाली भाषीको निधन, को हुन् उनीहरु ?
अमेरिकामा आगलागीमा परी ५ नेपाली भाषीको निधन, को हुन् उनीहरु ?
काठमाडौं । अमेरिकाको ओहायो राज्यको आक्रन सहरमा भएको आगजनीबाट ५ जना नेपाली भाषी भुटानी परिवारका सदस्यहरूको निधन भएको छ । सेप्टेम्बर १३ सोमबारका दिन बिहान आगलागी हुँदा ३ जना बालबालिका र २ जना वयस्कको निधन भएको हो ।
आक्रन ​अग्नि नियन्त्रण विभागले जनाए अनुसार बिहानै आगलागी हुँदा ५ जनाको निधन भएको र ४ जना घाइते भएको जनाएको छ । आक्रन शहरको लिनडेन एभेन्यु स्थित १११८ घर संख्यामा बिहान १२:५० मा आगो लागेको हो ।
विभागका अनुसार आकस्मिक कामदारहरूले उनीहरूका छिमेकी र नातेदारहरूले त्यहाँ पुगे पछि परिवारका सदस्यहरूलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेका थिए । त्यहाँको शव परीक्षण केन्द्रले जनाए अनुसार ३ जना बालबालिका र २ जना वयस्कको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ ।
उनीहरू पढ्ने विद्यालय आर्कन सरकारी विद्यालयका प्रवक्ताका अनुसार ५ वर्ष, ११ वर्ष र १६ वर्षका विद्यार्थीको निधन भएको जनाएका छन् । विद्यालयले गहिरो दुख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवार प्रति समवेदना प्रकट गरेको छ ।
नातेदार तथा छिमेकीका अनुसार त्यहाँ २ भुटानी परिवारहरू बस्थे भनी बताएका छन् । छिमेकी जिन हुड्सनले उनीहरू राम्रा मानिसहरु थिए भनिन । अन्य ४ जनालाई अस्पताल लागिएको अग्नि नियन्त्रण विभागले जनाएको छ ।
घाइतेहरुलाई छिमेकीहरुले घटनास्थलमै उपचार गर्ने पनि प्रयास गरेका थिए । आगलागीका मुख्य अनुसन्धान प्रमुख ग्यारी गुनथरका अनुसार बालबालिका सहित करिब ६० वर्षीय पुरुष तथा ४८ वर्षीय महिलाको निधन भएको बताए ।
उक्त स्थानमा २०१७ पछिको सबै भन्दा डरलाग्दो आगजनी भएको बताइएको छ । उनका नातेदार यम सुब्बा भने व्यक्ति कोलम्बसबाट आर्कन आएका छन् । सोमबार आगजनी हुँदा छिमेकी र नातेदारहरू त्यहाँ अगाडी भेला भएका मध्ये यम सुब्बा एक थिए ।
उनले आफ्नो पिताको निधन भएको जानकारी दिएका छन् । उनले के कारणले आगजनी भयो भन्ने बारेमा पत्ता लगाउन कोसिस गरि रहेको समाचार स्थानीय पत्रिका बिकोन जर्नल डटकमले लेखेको छ ।
खाल्डोमा पुरिएर कुवेतमा दुई नेपालीको निधन, एक जनाको उद्धार
न्यूयोर्कमा बाढीका कारण एकै परिवारका तीन जना नेपालीले गुमाए ज्यान
रोजगारीका लागि कुवेत पुगेकी महिलाले गुमाइन् ज्यान, को हुन् उनी ?
तेर्हौ तलाबाट हामफालेर नेपाली युवाले दिए ज्यान, ज्वरो-खोकीले अर्का एक जनाको मृत्यु
मलेसियामा अबैधानिक बसेका नेपालीले स्वदेश फर्कन पाउने, यस्तो छ प्रक्रिया
अमेरिकामा दुई नेपाली युवाले गुमाए ज्यान, खास के हो कारण ?